Barmaamujyadii Waxqabadka Xukuumadda Siilaanyo ee Telefiishanada Ka Bixi Jiray oo Hakaday iyo Sababta |
Barmaamujyadii Waxqabadka Xukuumadda Siilaanyo ee Telefiishanada Ka Bixi Jiray oo Hakaday iyo Sababta
“Madaxtooyada oo damac ka galay Kharashkii ay ku shaqeynayeen howl-wadeenada Barmaamujka diyaariyey iyo Khilaaf ka dhashay oo sabab u noqday hakadka Barmaamujka qaybihiisii hore baxeen”.
Hargeysa(GNN)-Barmaamujyo taxane ah oo ku saabsanaa Waxqabadka Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo ee todobadii sannadood ee ay talada haysa, kuwaasoo ka bixi jiray Telefiishka Dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay, ayaa istaagay kaddib markii ay Madaxtooyadu bixin wayday kharashkii loogu talo-galay sameynta Barmaamujyadaas.
Barmaamujkan oo ay muddo dhowr bilood ah diyaarinayeen Wariyeyaal iyo Farsamo-yaqaano isku dhaf ah oo ka kala socda Warbaahinta Dawladda iyo ta madaxbanaan, hindisihiisana ay lahaayeen xubno kamida Xukuumadda oo uu hogaaminayo Wasiirka Madaxtooyadu, ayaa qaybihiisii hore todobaadkii hore ka socdeen Shaashadaha Telefiishanada.
Hakadka ku yimi baahinta Barmaamujkaas, ayaa yimi kaddib markii khilaaf soo kala dhex galay Kooxdii dhanka Dawladda iyo xisbigeeda u qaabilsanayd maamulka Barmaamujyadaas iyo howl-wadeenadii diyaarinayey, khilaafkaasoo ka dhashay lacagtii lagu sameynayey Barmaamujyada oo ay bixin wayday Xukuumadda, gaar ahaan Guddida uu Wasiir Maxamuud Xaashi hogaaminayo ee howshan qorshaheeda iyo maamulkeeda lahaa.
Sida ay ilo-wareedyo arrintaas xogogaal u ahi Gobanimonews u sheegeen, howl-wadeenada Barmaamujka diyaarinayey oo qaybtii hore ee Telefiishanada ka baxday laga qaada iyadoo aan la siin Kharashkii lagula heshiis, ayaa diiday inay wareejiyaan qaybta labaad oo ay todobaadkii hore dhameeyeen, iyagoo ku doodday inaanay bixinayn Barmaamujkaas ilaa la siiyo lacagtii ay ku sameeyeen.
Diidmada howl-wadeenadda iyo dalabka hore ee Guddida Madaxtooyadu howsha u xilsaartay ee hore, ayaa dhalisay ismari-waa ilaa iyo iminka ay hakad ugu jiraan Barmaamujkaas qaybihiisa ugu muhiimsanaa, sida ay tibaaxayso xogta aanu helnay.
Xogtu waxay tibaaxday in labada dhinac mid waliba ku adkaystay go’aankiisa, isla markaana ay howl-wadeenadu gacanta ku hayaan Barmaamujyadii oo diyaara, laakiinse Kooxda xukuumadda u qaabilsan howshu ka war-wareegayaan inay kharashkooda u siiyaan sidii lagula heshiiyey.
Wasiirka Madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa laba todobaad ka hor khudbad uu ka jeediyey munaasibad lagu qabtay Magaalada Dacarta ka sheegay inay Telefishanada dalka oo dhan si joogto ah uga bixi doonaan Barmaamujyo ku saabsan waxqabadkii xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo.
Dhanka kale, waxa calaamad su’aal saarantahay qadarka lacagta lagu bixiyey howshan oo ah mid aad u badan iyo habka loo xulay Wariyeyaasha iyo farsamo-yaqaanada diyaarinayey oo ah kuwo tiro badan, kuwaasoo ku shaqaynayey guri Madaxtooyadu u kiraysay oo ay howshu ka socotay muddo dhowr bilood ah.
Waxa kale oo iyaduna xusid mudan in Barmaamujyadaas baahintooda lagu siiyey Kharash baaxadle Telefiishanada madaxbanaan ee ku hadla afka Soomaaliga iyo Telefishanka Qaranka..